Ilaina koa ny ben’ny tanàna mahay miara-miasa amin’izay fitondrana misy na iza na iza. Ny tanàna no jerena ary ilana fiaraha-miasa ny fampandrosoana eny ifotony. Izay fiaraha-miasa izay, hoy izy, tsy midika fironana amin’ny lafiny politika fa mba ahafahana mampandroso ny tanàna tantanana. Ho an’ny distrikan’Antananarivo Atsimondrano dia maro ireo kaominina miaina tsy fahandriampahalemana. Maro koa ny fotodrafitrasa hitako hoe tokony hojerena toy ny lalana. Maro ireo mbola lalan-tany. Eo amin’ny lafiny sekoly toy ny EPP dia mbola maro ireo ankizy mandia lalan-davitra vao tody any amin’izany sekoly izany. Eo amin’ny lafiny fahasalamana dia hita ny fahabangana ara-pitaovana amin’ireny CSB II ireny.